Sharci yaqaan qarsoodi ah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
«Waad salaaman tahay, magacaygu waa Tammy oo waxaan ahay« sharci yaqaan ». Qof ayaa maskaxdayda ku dhalleeceeyay toban daqiiqo ka hor. "Waxay u badan tahay in wax la mid ah la mid yahay kulanka" Sharci yaqaanada qarsoon " (AL) qiyaas. Waxaan ku sii socon lahaa oo sharraxi lahaa sida aan ku bilaabay waxyaalaha yaryar; aniga oo moodaya inaan ahay qof qaas ah maxaa yeelay waxaan qabtay sharciga Muuse. Sida aan bilaabay inaan hoos u eego dadka aan ka fekerin isla wixii aan sameeyay. Way ka sii dartay: Waxaan bilaabay inaan rumaysto inayna jirin Masiixiyiin aan ahayn kuwa ku jira kaniisaddayda. Sharci ahaan sharcigaygu wuxuu ka mid ahaa inaan ka fikiro kaliya inaan ogahay nooca runta ah ee taariikhda Kaniisadda iyo dunida intiisa kale la khiyaaneeyey.
Qabatinkeygu wuxuu noqday mid aad u xun oo aanan xitaa dooneynin inaan la joogo dad aan kaniisadkeyga aheyn, oo ku jiray "adduunka". Waxaan baray carruurteyda inay u adkeysi la mid yihiin sidii aniga oo kale. Sharciga ayaa si qoto dheer uga dhex jira maskaxda masiixiyiinta .. Mararka qaar talooyinku way jabsadaan oo waxay sii ahaanayaan wakhti dheer in kasta oo xididka ugu weyn hore loo soo saaray. ugu dambayntii sax ma aha goorta aad si buuxda u bogsatid.
Mid ka mid ah xididdada ugu madax adag waa fikirka ku wajahan shayga marka aan ula dhaqanno dadka sida ashyaa'da annaga oo kaliya qiimeynna iyaga oo u eegaya waxqabadkooda ku saleysan waxa ay matalaan. Taasi waa habka adduunka. Haddii aadan fiicnayn ama aadan weynayn, laguma tixgelin doono oo kaliya wax aan qiimo lahayn, laakiin sidoo kale waa la faafin karaa.
Adkeyn aad u badan oo ku saabsan wax qabadka iyo adeegsiga ayaa caado u ah fikirka in waqti dheer qaato. Haddii lamaanaha iyo xaasasku aysan sameynin wixii laga filaayay inay sameeyaan, dhaqso ama goor dambe waad niyad jabi doontaa ama xitaa qadhaadhka mustaqbalka. Waalidiin badan waxay culeys aan loo baahneyn saaraan carruurtooda si ay u gutaan. Tani waxay u horseedi kartaa qaab dhismeed liita ama dhibaatooyin xagga shucuurta ah. Kaniisadaha dhexdeeda waxaa jira adeecitaan iyo tabarucid shay (ha ahaato lacag ama wax kale) badiyaa barxadda qiimayaasha.
Ma jiraa koox kale oo dadka ka mid ah oo midba midka kale u xukumaa tabar iyo xamaasad aad u badan? Ficilkan aadamiga ah ee bini aadamku dhib kuma laha Ciise. Wuxuu arkay ninka camalka ka dambeeya. Laakiin Farrisiintii waxay u keeneen naag sino la qabtay, laakiin waxay arkeen wixii ay sameeyeen (meeday lammaanahaagu?). Ciise wuxuu u arkay inuu yahay dambiilaha keli ahaanta ah ee isagu wax yar jahwareeriyay kana xoreeyay xaqnimada nafteeda ee eedeeyahayaasheeda iyo xukunkeeda naagta inay tahay shay.
Ku laabo “Kulankeygii AL”. Haddii aan lahaa qorshe laba iyo toban-talaabo ah, waa inay kujirtaa layli sida looula dhaqmo dadka sidii dad oo aan ahayn sidii ashyaao. Waxaan ku bilaabi karnaa inaan eegno qof aan si joogto ah u nahay U xukumaan sidii ay ku dhacday dhilladaas .. Ciisena masiixiisa hortiis taagan ama isaga ayaa la yaaban haddii aannu tuurno dhagaxa ugu horreeya.
Laga yaabee inaan ka shaqeyn doono kow iyo tobanka talaabadood, sidoo kale, laakiin hadda, waxaan u maleynayaa inay ku filan tahay haddii aan "dhagxaankeyga" ugu horreeya ku soo jiido aniga inaan is xasuusiyo in Ciise uu aad u daneynayo cidda aan nahay waxa aan qabanno.